Google dia miasa amin'ny lahasa marani-tsaina vaovao ho an'ny Android Android manaraka Androidsis
Na dia mety hanome fiheverana aza fa tonga ny Android 7.0 Nougat, ny marina dia angamba, mandritra ny fihaonambe Google I / O manaraka izay hatao amin'ny Mey, Google dia hanambara kinova vaovao izay mifanaraka amin'ny Android 8.
Tsy dia fantatra loatra ny momba ny Android manaraka, saingy misy fivoahana vaovao manamarika izany Google dia miasa amin'ny fampiasa fanampiana vaovao ho an'ny Android izany dia mety hitranga amin'ny fanavaozana lehibe manaraka.
Araka ny vaovao navoakan'ny tranonkala VentureBeat, Google dia mamolavola endrika antsoina hoe Copy Less. Ny tanjon'ity fisehoan-javatra vaovao ity dia ny hampihenana ny asa fandikana sy ny fametahana atiny eo anelanelan'ny rindranasa.
Mba hampisehoana ny fomba fiasan'izy io, nanontany ny loharanom-baovao tsy fantatra anarana momba ny fomba fiasan'ity endri-tsoratra ity amin'ny fifampiresahana anelanelan'ny olona roa momba ny toerana hisakafoanana hariva. Ny olona mahita trano fisakafoanana misy famerenana tsara amin'ny Yelp ary ny karazana "dia" ao amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra. Ny fiasa «Copy Less» midira ary apetaho hoazy ny adiresin'io trano fisakafoanana io, izay azo alefa any amin'ilay namana izao. Inona no tsy mazava raha ampidirina ao amin'ny keyboard Google's Gboard na amin'ny Android tenany ny Copy Less.
Nasongadin'io loharano io ihany fa miasa amin'ny endri-javatra fandefasan-kafatra maranitra vaovao i Google, ao anatin'izany ny iray izay azon'ny Android atao fantaro rehefa manoratra adiresy ianao ary avadiho ho lasa rohy izay manokatra mivantana ny toerana ao amin'ny Google Maps io lahatsoratra io.
Farany, ny tatitra de VentureBeat milaza fa mivoatra koa izy ireo fihetsika vaovao hampiasaina amin'ny rantsan-tananao afaka mamela hitsin-dalana manokana. Ohatra iray: raha mampiasa ny rantsan-tànany eo amin'ny efijery finday avo lenta ny olona hanoratany ny litera "C", Android dia hanaiky baiko hanokatra ny lisitry ny fifandraisan'ny mpampiasa. Ity zava-baovao ity dia efa nampiharin'i Huawei tamin'ny sasany amin'ireo finday avo lenta Android, toy ny Mate 9.
Amin'ny 17 Mey dia ho hitantsika ny tena marina amin'izany rehetra izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Google miasa amin'ny endri-javatra marani-tsaina vaovao ho an'ny Android manaraka